देश दौडहामा रहेका प्रधानमन्त्रीले चैतदेखि सिंहदरबार टेकेनन्, अरु मन्त्रीको पनि उस्तै पारा!
काठमाडौँ। हिजोआज झ्यापझ्याप बत्ती निभिरहन्छ । छिनको छिनमै बिजुली गएर नागरिकलाई हैरान पारे पनि सरकारले यसलाई ‘लोडसेडिङ’ नाम दिइसकेको छैन । बेला न कुबेला बिजुली जानुको खास कारण के हो त भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सरोकारवालासँग छलफल चलायो, समस्याको समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको छिमेकमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा भने साताभन्दा धेरै भयो, मन्त्री पुगेकै छैनन् । सोमबार बेलुकी पोखरामा रहेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कान्तिपुरसँग अर्घाखाँचीदेखि बुटवल, नवलपरासीदेखि तनहुँ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा वृत्तान्त सुनाए र भने, ‘के गर्नु! विशिष्ट परिस्थिति छ, पार्टीको काममा पनि जुट्नैपर्‍यो, सरकारको काम पनि गर्नैपर्‍यो ।’ उनले अहिले आफूहरूको प्राथमिकता चुनावमा एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने भएकाले त्यतैतिर केन्द्रित भएको बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रीहरू जनप्रतिनिधि पनि भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भेट्न गएको र त्यही बेला पार्टीका कामसमेत भएको बताउँछन् । ‘सरकारको काम व्यवस्थापन गरेरै मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्, कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट, नयाँ मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा जाने र खुसियाली साटासाट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरू पार्टी काममै लागे भन्ने पनि होइन होला । फेरि पार्टी काममै गएको पनि होइन । जिल्ला जाँदा संयोगले पार्टीको काम पनि गरेको हो, आमसभाहरूमा सहभागी भएको हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ।